नेपालमै पहिलोपटक ‘रोबटबाट न्युरो सर्जरी’ गर्ने केएमसी अस्पतालको तयारी – Dainik Samchar
April 4, 2021 424
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले ‘रोबटिक सर्जरी’ थाल्ने भएको छ। उसले यो प्रविधि नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको दाबी गरेको छ।
‘रोबट मेसिन’ ल्याएर ‘रोबटिक सर्जरी’ थाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको केएमसीले जनाएको छ। ‘रोबटिक सर्जरी’का लागि केएमसीले करिब १० करोडको लागतमा मेसिन खरिद गरिएको दाबी गरेको छ।
तर, यो उपकरण भने केएमसीले काठमाडौं ल्याइसकेको छैन। ‘मेसिन आउने क्रममा छ, केएमसीबाट डेढ महिनाभित्र ‘रोबटिक सर्जरी’ थालिने छ,’ केएमसीका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनिल शर्माले भने। शर्माले न्युरो सम्बन्धित सबै शल्यक्रियामा रोबट प्रयोग गरिने बताए।
‘नेपालमै पहिलोपटक हामीले रोबटिक सर्जरी थाल्दैछौं,’ शर्माले भने, ‘अमेरिकाबाट मेसिन खरिद भइसकेको छ। प्राविधिक पक्ष मिलाउँदैछौं। डेढ महिनाभित्र नेपालमै पहिलोपटक न्युरो सर्जरीमा रोबट प्रयोगमा ल्याउँदैछौं।’
त्यसपछि अन्य शल्यक्रियामा पनि रोबटको प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ। ‘रोबटिक सर्जरी’मा चिकित्सकले बनाएको योजनाअनुसार रोबटको सहायताले अप्रेसन गरिने उनले बताए।
यो प्रविधि सूक्ष्म र जटिल शल्यक्रियामा प्रयोग हुने र यसले अप्रेसनमा धेरै सहजता प्रदान गर्ने केएमसीका वरिष्ठ न्युरो सर्जन प्रा.डा. अमित थापाले बताए।
‘रोबटले नै सबै अप्रेसन गर्ने भने हैन, सर्जनले योजना बनाएर रोबटको सहायता लिएर अप्रेसन गर्ने हो। सानो-सानो अगंमा पुगेर गरिने सूक्ष्म अप्रेसनमा सर्जनको हात काम्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा रोबटको सहायता लिँदा काम उत्कृष्ट हुने हुनाले सर्जनलाई सजिलो हुन्छ,’ डा.थापाले भने, ‘सानो प्वाल बनाएर गर्नुपर्ने अप्रेसन, शरीरको संवेदनशील अंगमा पुगेर गरिने जटिल अप्रेसनहरूमा रोबटको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। जसका कारण अप्रेसनको नतिजा उत्कृष्ट आउँछ।’
उनको दाबी अनुसार नेपालका कुनै अस्पतालमा हालसम्म ‘रोबटिक सर्जरी’ छैन। अत्याधुनिक र भरपर्दो मानिने भएकाले केएमसीमा पहिलोपटक सुरू गर्न लागिएको उनको दाबी छ।
Prevदुःखद खबर: डोटीको सेती नदीमा डु’बेर इञ्जिनीयरिङ पढ्दै गरेका किशोरको मृ,त्यु ;
Nextकृष्ण कंडेलकै अगाडी आखिर किन रोइन अस्मिता, पुरा गरिदिए अस्मिताको यस्तो सपना (भिडियो सहित)